“Waan maqlay inay Man United i dooneyso laakiin Jose Mourinho weli taleefan igama uusan soo wicin.”. – Gool FM
“Waan maqlay inay Man United i dooneyso laakiin Jose Mourinho weli taleefan igama uusan soo wicin.”.
Byare June 21, 2016
(France) 21 Juunyo 2016. Cesar Azpilicueta ayaa shaaca ka qaaday inuusan Jose Mourinho kala hadlin arrinka ku aadan inuu ku biirayo Man United balse sheegay inuu ka war qabo xiisaha ay u heyso Red Devils.
Usbuucii la soo dhaafay jariiradda ka soo baxda Spain ee AS ayaa sheegtay in Jose Mourinho uu doonayo inuu Old Trafford kula midoobo daaficiisii hore garabka midig ee kooxda Chelsea Azpilicueta.
Waxay hoosta ka xariiqday jariiradda in tababaraha Chelsea Antonio Conte uu u furnaan doono inuu iibiyo 26-jirka reer Spain iyadoona lagu heli karo 11.5-milyan oo bound.
Sikastaba, Azpilicueta ayaa u sheegay Radio-ga dalka Spain Cadena Ser inuu ku faraxsan yahay kooxdiisa Chelsea.
“Maya i aamini mise ha i aaminina.” Azpilicueta ayaa sidaa ku jawaabay mar wax laga waydiiyay inuu la hadlay Jose Mourinho.
Laakiin wuxuu qiray inuu wax ka maqlay sheekada inay xiiseynayaan kooxda ku ciyaarta gegida Old Trafford ee Man United, yeelkeede, wuxuu sheegay inuu diiradda saarayo uun xulkiisa qaranka Spain oo qeyb ka ah Euro 2016 iyo kooxdiisa Chelsea.
EURO 2016: GROUP C: Germany oo ku soo baxay booska hore iyo Poland oo labaad gashay (SAWIRRO)
RASMI: Kooxda AS Roma oo wada iibsatey Stephan El Shaarawy & Norbert Gyomber